Best Forex Trading System sy System | Forex Software - FXCC
Manantena ianao fa iray amin'ireo mpitantana ECN-STP manerantany no hanome anao ny farany amin'ny sehatra farany amin'ny sehatra hivarotana
ary amin'ny FXCC dia tsy mandiso fanantenana velively. Ny mpanjifantsika dia afaka miditra amin'ny tsena FX amin'ny fitaovana rehetra ankafizina; tanana, tablette, solosaina,
PCs ary amin'ny alalan'ny fampiasana ireo server remote. Ny mpiara-miasa akaiky aminay amin'ny fidirana amin'ny tsena dia ny MetaQuotes Software Corporation, ny
mpamorona sy mpandrindra an'izao tontolo fanta-daza manerantany izao, ny loka nahazo ny loka FX ary tena malaza indrindra, MetaTrader 4.
MetaTrader 4 dia andian-dahatsary maromaro noforonin'ny MetaQuotes Software Corporation. MetaQuotes Software Corp. dia orinasa fampandrosoana software izay nanomboka nivarotra tao amin'ny 2000. Hatramin'ny nanombohany, ny orinasa dia namolavola laza malaza ary nahitam-pahombiazana niavaka tamin'ny fampivelarana sy ny famoahana sehatra fifanakalozan-dresaka vaovao, enti-manomboka, serivisy ary vahaolana amin'ny kianjan'ny varotra ara-barotra.
Ny habetsaky ny mpivarotra sy ny mpivarotra am-pito dia afaka mivoatra mba hifanaraka amin'ny fomba amam-pihetsika sy ny fahalianany, amin'ny fampiasana ny karazana endri-javatra sy tombontsoa rehetra azo ampiasaina amin'ny sehatra MetaTrader, dia mbola tsy voamarika ao amin'ny orinasa. Na dia izany aza, ho an'ireo mpivarotra vao haingana sy tsy manana traikefa dia tena mahatalanjona tokoa ireo sehatra: ny mpampiasa mora, tsotra ary tsotra ampiasaina.
Na mpihazakazaka tapa-potoana hitadiavana hampitomboana ny tanjonao sy ny fahafahana hahita fahombiazana ianao, na hihevitra ny tenanao ho matihanina amin'ny fotoana feno, izay te hampiasa: mpizara virtoaly virtoaly na mampiasa teknika algorithmika hiditra amin'ny tsena amin'ny haingam-pandeha, MetaTrader dia manana vahaolana tsara ho anao. Ankoatr'izay, amin'ny alalan'ny FXCC dia mahatsapa mivantana koa ianao amin'ny alàlan'ny fanitsiana tsy misy fandraisan'andraikitry ny birao, raha mahazo fidirana amin'ny dobo mpamatsy amin'ny liquidity amin'ny alalan'ny tambajotran'ny ECN. Manome toky fa ny interbank quotes sy ny fielezana azonao dia sariohatra marina momba ny fepetra misy ankehitriny.
Manolotra ireto sehatra manaraka ireto ny FXCC: MetaTrader 4, MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 multi terminal ary MAM (mpitantana ny kaoperaly maro).
Andramo ny tranokalantsika!
Miaraka amin'ny mpivarotra MetaTrader 4 iray amin'ireo malaza indrindra sehatra fifanakalozana ara-toekarena eto amin'izao tontolo izao. Azo itokisana, mafonja ary mavitrika, ny sehatra dia ahitana ireo fitaovana ilaina sy varotra ilaina mba ahafahan'ny mpivarotra: mitarika fikarohana sy fanadihadiana, miditra sy mivoaka ny varotra ary mampiasa rindrambaiko maimaim-poana fanamoriana hafa, Expert Advisors (EAs). Raha mikasa ny handroso mialoha ny vahoaka sy ny EAs ara-barotra an-tserasera ianao, dia ny MetaTrader ihany koa no nanatsara ny fahaizan'ny programa - MQL4, izay ahafahan'ny mpivarotra mandrindra ny robot ho an'ny varotra.
misintona Ankehitriny Hamantatra bebe kokoa User Guide
Manolotra ny fitaovana lehibe indrindra ho an'ny varotra Forex.
Ny MetaTrader 4 Mobile App dia sehatra fifampizarana tanteraka sy feno ho an'ny Android sy iPhone mampiasa fitaovana finday. Io fampiharana tsy manam-paharoa io dia ahafahan'ny mpivarotra mifidy avy amin'ny orinasan'ny brokerage an-jatony mifaninana amin'ny raharahan'ny mpivarotra. Ny programa dia manolotra ny mpivarotra rehetra mba hitadiavana ny fampivoarana ara-barotra Forex. Ampidirina ao anatin'ilay seha-pifaneraserana ny: fametrahana baolina maro, tantara ara-barotra, drafitra interactivée, fanadihadiana ara-teknika ary ny karazana fifantenana fitaovana finday matihanina.
Ny mpivarotra mampiasa ny MetaTrader 4 Mobile App dia manana ny asany mahomby amin'ny fifanakalozana Forex amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra eto an-tany. Ny tranokala iray manontolo momba ny analytics sy ny safidy momba ny varotra dia misy amin'ny fitaovana finday.
Ny fifanakalozana finday amin'ny MetaTrader 4
Fifehezana tanteraka ny kaonty momba ny varotra
Ny varotra avy any amin'ny toerana 24 / 5
Ny karazam-pitondrana rehetra sy ny famonoana
Karazana marika interactive
Karazana endri-tsoratra 3: baoritra, lampihazo jaky sy tsipika tapaka Japoney
9 fotoana voafaritra: iray minitra ka hatramin'ny iray volana
30 amin'ireo famantarana ara-teknika malaza indrindra
23 fanadihadiana zavatra
Vaovao momba ny tsena ara-bola
Free chat sy mailaka maimaim-poana
Raiso izanyGoogle Play azo jerena ao amin'nyApp Store Hamantatra bebe kokoa Android User Guide iOS User Guide
Natomboka tamin'ny 2006, ny MetaTrader 4 MultiTerminal dia singa manan-danja sy hajaina ao amin'ny MetaTrader 4 Online Trading Platform ankehitriny. Ny MultiTerminal dia natao hanaraha-maso ny kaonty maro samihafa. Ity dia toerana tena sarobidy sy sehatra ho an'ireo mitantana vola, na ireo izay mitantana ny kaontin'ny mpampiasa sy ireo mpivarotra miasa miaraka amin'ny kaonty maro samihafa.
Ny MT4 MultiTerminal dia mahomby mampifandray ireo sehatra mampivelatra ny tsena izay mampifandray ny varotra mahomby amin'ny kaonty maro sy amin'ny fampiasana manokana. Ny interface interface dia mitovy amin'ny an'ny MetaTrader 4 Client Terminal. Izy io dia dingana tena mahavariana sy mahaliana, ka ny mpihazona rehetra fantatra amin'ny fampiasana ny MetaTrader 4 Client Terminal dia afaka mamantatra mora foana.
Ny MetaFX dia manome ny fampiharana rindrambaiko broker fampahalalana fantatra amin'ny anarana hoe MAM (Manager Account Manager) Ho an'ny mpivarotra mpivarotra varotra fitantanana tahirim-bola. Ny MAM dia ahafahana miasa amin'ny kaonty any amin'ny fitanana, amin'ny fampiasana fomba fiasa mahomby, miara-miasa amin'ny Expert Advisors ary maro hafa. Ny sasany amin'ireo singa sy tombotsoa dia ahitana:
Ny Server Side plugin dia mamorona famonoana maika
Famaranana amin'ny ampahany amin'ny baikon'ny famonoana ny kaonty Master
Hanomezana mari-pamantarana mahazatra halefa amin'ny sehatra MT (sehatra samihafa)